साँसदले खानेपानी मन्त्रीलाई सोधे-मेलम्चीमा कमिशन माग्ने को हो ? – BikashNews
साँसदले खानेपानी मन्त्रीलाई सोधे-मेलम्चीमा कमिशन माग्ने को हो ?
२०७५ पुष १२ गते १३:०७ विकासन्युज
काठमाण्डौ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले काम गर्ने कि छोड्ने भन्ने अन्यौलता कै बीच कमिशनको कुरा उठ्न थालेको छ ।
मेलम्ची अब के हुन्छ ? कहिले आउँछ मेलम्चीको पानी ? यी प्रश्नहरु उठिरहेका बेला प्रतिनिधि सभा अन्तरगत विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनको विद्यमान अवस्थाको बारेमा छलफल भएको छ ।
सो बैठकमा मेलम्चीमा कमिशनको बारेमा कुरा उठेको छ । छलफलमा विकास समिति सभापति कल्याणी खड्काले आफैँ बनाउने भनेको केही दिन पछि फेरि उसैले बनाउँछ किन भनेको भनी खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई प्रश्न गरेकी थिइन् ।
सभापति खड्काले भनिन्–अब कहिले आउँछ मेलम्ची भन्दिनुस् । बरु केही समयपछिको मिति तोक्नुस् तर भनेको मिति एकिन होस् ।
अर्कोतर्फ निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई भुक्तानीको कुरा के हो ? यसको जवाफ चाहियो–सभापति खड्काको प्रश्न थियो ।
सो छलफलमा साँसद राजेन्द्र लिङ्देन भने–कमिशनको कुरा उठाए, कम्पनी लाखौं दिन तयार थियो रे, तर करोडौंको कुरा आएपछि ठेक्का तोकेको रे । यो कुरा नागरिकसम्म पुगिसकेको छ । कमिशन माग्नेलाई कारवाही गर्नु पर्छ–उनले भने ।
मेलम्ची प्रकरणमा विकास समितिले छानबीन समिति बनाउनु पर्ने कुरा उनले उठाएका थिए ।
समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा साँसद भलनाथ खनालले मेलम्ची आयोजनाको इतिहास सुनाएका थिए । यो आयोजना ३ दशक देखिको आयोजना हो । मन्त्रीलाई थाहा रहेनछ–उनले भने ।
खनालले मेलम्ची आयोजना पञ्चायतमा सोचिएको आयोजना भएको बताए । मेलम्चीले प्रजातन्त्र र गणतन्त्र काल भोगिसक्यो । अझै बनेको छैन । मन्त्रीले राम्रो नेतृत्व दिन सक्नु भएन–उनले छलफलमा भने । अब आफैँ बनाउन सकिन्छ कि नाई ? उनको प्रश्न थियो ।
विकास समिति बैठकमा साँसदको प्रश्नः मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ ?
महासंघको भिजन पेपर सार्वजनिक, १ सय खर्बको अर्थतन्त्र, २२ लाखलाई रोजगारी
सामाजिक सुरक्षा कोष: जागिर छोड्दा पैसा फिर्ता पाइने, ८० प्रतिशत विशेष सापटीको सुविधा
राजेन्द्र मल्ल चेम्बर अफ कमर्शको अध्यक्ष, विशिष्टलाई समेट्दै ५५ जनाको कार्यसमिति
पद खोसिएका ४ मन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले गरिन् पुनर्नियुक्त, कसलाई कुन मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी ?
रेलको ६ महिनादेखिको घुम्टो खुलेन, अझै कानुनी अड्चन, मोदी र ओलीले उद्घाटन गर्ने तयारी
जीवन बीमा कम्पनीले गैरकानुनी रुपमा एजेन्टलाई दिए ८ अर्ब ७१ करोड ऋण